Kuki nke Viennese na jam, cheese chiri, mmiri ara ehi - nke ntụziaka nke shortbread mgwakota agwa na ụdị toppings
Nri bisia - Ezi ntụziaka nke aja mmiri na nri
Kuki kuki Vienna bụ ụzọ dị mma maka isi nri. A na-eme ya ngwa ngwa na dịka o kwere mee: ọ bụ kuki nke obere kuki, nke onye nnabata ọ bụla, na jam, nwere ike dochie anya na ngwaahịa ndị ọzọ.
Esi esi esi nri bisie na ulo Viennese?
Kuki ndị Vienna bụ ndị a ma ama maka ebe ha jikọtara obere mkpirisi na jam na-egbu egbu. Na mgbakwunye na jam, ị nwere ike iburu tomato, ala na sugar, jam, ị nwere ike ịgbakwunye na ngwaahịa ndị ọzọ, dị ka cheese cheese, apụl, ọbụna carrots.
Enwere nanị iwu abụọ maka njuju ahụ: ọ ga-adị ka oke ma dị ka acidic dị ka o kwere mee.
Maka ule nyocha, a na-agbaze bọta, mana kuki Vienna na mmanụ ma ọ bụ margarine adịghị njọ.
Ọ bụrụ na jam dị ụtọ ma dị ụtọ, mgbe ahụ, ịchọrọ iji ihe dịka pasent 25 na-erughị shuga maka mgwakota agwa ahụ, ka ọ ghara iji obi ụtọ ju ya.
Ọ bụrụ na ị na-aṅụ sugar kama shuga, ntụ ọka ahụ na-eme ka ọ dịkwuo nro.
Kama iko ntụ ọka, ị nwere ike iji soda (na ọkara ọkara).
Ntụziaka a kpochapụrụ maka kuki kuki nke Viennese nwere nsen, ma otu nwere ike ime site na enweghị ha (ọdịdị dị iche).
Kuki nke Viennese na jam - uzommeputa
Kuki kuki Vienna na jam na-eme ngwa ngwa ma dị mfe. Jam maka mmiri ga-agafe na sieve, nke mere na ọ ka njọ. Mgbe ụfọdụ, a ghaghị ime ya ọtụtụ ugboro ka ngwecha ahụ ghara ịdị mmiri. Maka piquancy nke uto, ị kwesịrị ị na-ejuputa, mgbe ahụ, e nwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ụtọ na utoojoo. Ọ bụrụ na ị na-ewere sugar ntụ ntụ kama shuga, mgbe ahụ, ntụ ọka ahụ ga-adị mfe ịkụ aka, na kuki Vrienese shortbread ga-adịkwu jụụ.
ntụ ọka - 4 iko;
bọta - 200-230 g;
shuga - 1 iko;
ntụ ntụ - 1 tsp;
Azụ na-eti shuga na shuga ruo mgbe ọkpụkpụ ahụ kwụsịrị.
Gbakwunye bọta a gbazere agbacha, hichaa ruo mgbe ị ga-adị ire.
Gwakọta ntụ ọka ahụ na ntụ ntụ ma jiri nwayọọ nwayọọ na-ewebata ihe na-agagharị n'ime ikpo okwu ahụ, na-echegharị n'ihu.
Igwakorita ntụ ọka ahụ. Nke atọ ka ị dị ọcha na friza.
Nlekọta nke ule ahụ na-apụ ma tinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ.
Dụba n'ụba na jam ma ọ bụ jam.
Ngwakọta a gwara agwa iji nweta, grate ma jiri mmesapụ aka fesa ihe a na-ahụ anya site n'elu.
Rie maka ihe dị ka nkeji iri abụọ na ise ruo mgbe kuki Vienna kpara.
Kuki nke Viennese na cheese chi - uzommeputa
Achịcha Vienna na cheese cheese bụ obere ihe na-adịghị mma nke achịcha eghe, na ọbụna obere caloric, n'ihi na ntụ ọka ụfọdụ na-edozi cheese dị mma. Ị nwere ike ichota pastries na almond petals, lemon zest, sugar ntụ ntụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwekwara ike itinye jam ma ọ bụ jam na n'elu.
ntụ ọka - 120-150 g;
bọta - 210-230 g;
obi chiiz 9% - 130-160 g;
Kpochapu obere mgwakota agwa na mgbakwunye nke obi chiiz. Tinye na mgwakota agwa otu bee.
Kwe ka mgwakota agwa kwusi maka minit 30.
Nyefee na mgwakota agwa oyi akwa, fesaa ya finely grated mgwakota agwa.
Acha maka minit 30.
Kuki Kuki Shortcut Vienna
Enwere ike ime obere kuki maka Viennese n'ọtụtụ ụzọ, mana enwere nhọrọ nke nwatakịrị nwere ike ịnagide. Ọ bụrụ na ị na-ewe mmanụ na-esi nri, kuki agaghị enwe afọ ojuju, ọ gaghịkwa agbaze butter. Ezigbo mma maka acid bụ ihe na-adọrọ adọrọ. Okwesiri ka ejiri ezigbo okwute mee ya, nke mere na ngwakọta nke mgwakota agwa na ihe di ka ihe dika otu.
ntụ ọka - 250-275 g;
mmanụ ọka - 210-230 g;
sugar powdered - 1 iko;
currant jam - 150-180 g.
Sugar ntụ ntụ na àkwá na-eti ihe na mixer, tinye bọta.
Mee ka ntụ ọka ahụ dị nwayọọ, nwuo.
Gwakọta ihe na-esi ísì ụtọ ruo minit 30 na oyi. Were otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ule ahụ na friza.
Na mgwakota agwa na-akpọrepu si, tee na otutu jam. N'elu ya na mgwakota agwa.
Tinye kuki Vienna na oven ruo mgbe e guzobere eriri.
Kuki Vienna na mmiri ara ehi
Ntụziaka maka nkwadebe nke kuki Vienna na mmiri ara ehi na-eme ka mmiri ghara ịdị iche na usoro nhazi oge ochie na jam, ma kama nke ikpeazụ tinye nchịkọta nke mmiri ara ehi sie ike. Sugar na nke a, ịnwere ike itinye ntakịrị, n'ihi na enweghị ọnya ọ bụla, ya mere kuki nwere ike gbanwee ya.
Shortbread - ½ n'arọ;
mmiri a na-eme ka mmiri sie ike - 1 ite.
Kpochaa ntụ ọka ahụ dị mkpụmkpụ, wepụ nke atọ ka ajụkwa maka nkeji 20-30.
Wepụ ihe mgwakota agwa ahụ na akwa, tinye ya na ebu. N'elu elu na mmiri dị mkpa nke dị na mmiri ara ehi.
Grate akụkụ dị mma nke ntụ ọka ahụ.
Ime ihe ọkara otu awa tupu red.
Mkpụrụ achịcha Viennese na-enweghị àkwá
A na-eme kuki Vienna kpụ ọkụ n'ọnụ site na obere ngwaahịa nke na-adị mgbe niile. Kama nke bọta na-ewere ihe oriri, na àkwá na-anọchi starch. Ejighizi achicha ntụ ọka, ịkwesighi itinye soda. Enwere ike itinye ihe ọ bụla, site na mpempe ọkụ na mkpụrụ, mkpụrụ osisi sliced ​​ma ọ bụ tomato. Iji detụ ụtọ, kuki Vienna na mmanụ na-esi nri na-enweghị àkwá adịghị mma ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe oriri.
ntụ ọka - 3 iko;
mmanụ ihe oriri - 200-230 g;
starch - 70-80 g;
shuga - 120-140 g.
Mix butter, sugar and vanillin together until homogeneity.
Jiri nwayọọ gwakọta ntụ ọka, whisking.
Ikwanye ma kpochaa mgwakota agwa, kpochapụ kuki nke enweghị mmetụta.
Achicha maka minit 25-30.
N'elu ya na jam na uche ma ọ bụ fesaa ya na mkpụrụ, sesame, sugar powder.
Kuki kuki nke Vienna
Vienna biscuits kpochapu nwere ike ime ihe kariri ma mara mma, ma oburu na ime ya dika French saber. Emere ya na sirinji confectionery. Ị nwere ike ichota ihe oriri na pastry na chocolate, ihe ọ bụla ma ọ bụ paste chocolate ("Nutella", wdg), mkpụrụ ala, siere mmiri ara ehi.
ntụ ọka - 200 g;
mmiri ara ehi - 40 g;
bọta - 150 g;
Ejiri peanut - 50 g;
shuga - 50 g.
Ghichaa bọta, tie ya na sugar.
Mmiri ara ehi na peanut na-agwakọta iji gbanye ma gbazee. Tinye na sugar na bọta.
Jiri nwayọọ nwayọọ banye na ntụ ọka, gwakọta ntụ ọka ahụ.
Site n'enyemaka nke syringe pastry tinye kuki na mpempe akwụkwọ. Tinye n'ime oven maka minit 25.
Mgbe ọ dị njikere ịmịnye akụkụ nke kuki ahụ n'ime chocolate.
Kuki vienna na apụl
Ekwenyere na kuki ndị Vienna bụ mgbanwe nke ụkọchukwu Austrian strudel . Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na a na-enweta kuki Viennese na-atọ ụtọ nke ukwuu na mgbakwunye apụl. Ọ dị ka strudel, dịka obere ntụ ọka. Achịcha maka mmiri dị mkpa iji were sugar, cinnamon, gụchaa ha, ị ga-etinye ya na njupụta na starch. Iji nwaa osisi apụl ka ọ ka mma iji ude ahụ.
apụl - 3 iberibe;
shuga - ½ iko;
pawuda - 1 tsp;
Kpoo obere pastry ahụ, wepụ ihe si na friza, ma wepụta ụzọ abụọ n'ụzọ atọ ma dowe ya na mpempe akwụkwọ na-ekpuchi ya.
Apụl na-ete, mix ya na shuga, pawuda, starch. Tinye na mgwakota agwa n'elu.
N'okpuru ihe na-adịghị mma. Richaa kuki shortbread Viennese maka ọkara otu awa.
Ọ bụrụ na achọrọ, fesaa na powdered shuga, mkpụrụ.
Kuki nke Viennese na carrots
Maka ezumike ụmụaka, ị nwekwara ike ịkwadebe kuki Viennese - ihe nhazi nke a bụ uru iji gbakwunye carrots bara uru. Na ule, a naghị ahụ ya anya, ma uru nke akwukwo nri a na-ekwu maka onwe ya. Otu nnukwu karọt zuru oke. Dị ka jam, ị nwere ike iji apụl ma ọ bụ apricot jam na nke a.
carrots - 1 ibe;
apụl jam - nụrụ ụtọ.
Knead kpochapu obere pastry (300 g), na-agbakwunye ya finely grated carrots.
Tinye na mpempe mmiri, kpoo jam ma fesaa ya na ihe ndị na-adịghị mma nke ntụ ọka ahụ.
Ime ruo mgbe crispy.
Nri bisia na lemon - uzommeputa
Biskits Vienna na lemon - otu n'ime ihe na-aga nke ọma. A na - enweta "jam" nke ha na mmetụ obi ụtọ ma jiri nlezianya kpuchie ụtọ nke obere ntụ ọka. Na mgwakota agwa, kwa, ị nwere ike itinye obere zest site na lemon. Ị nwere ike ichota ihe ndị na-eri nri na zest ma ọ bụ sugar ntụ ntụ, fesa ya na mkpụrụ na mkpụrụ osisi candied.
shortbread mgwakota agwa - 400 g;
shuga - iko 2;
lemon - 2 PC.
Kpoo obere pastry ahụ, tinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ 2/3, na nke atọ iji jụụ.
Lemons ejiri mmiri na-esi na mmiri esi agafe, gafere site na anụ grinder, jikọta ya na shuga ruo mgbe ọ ga-adị ire. Tinye uka na mgwakota agwa.
Grate ihe mgbochi ahụ n'elu. Ka izipu n'ime oven maka minit 30.
Kuki Vienna na chocolate
Kuki dị iche iche Vienna dị na oven nwere ike iche na uto chocolate. Enwere ike ịtinye chocolate na mgwakota agwa, mgbe ahụ, kuki ga-enwe ndo na-acha odo odo na-acha odo odo. Naanị ị nwere ike ịgbakwunye ibe chocolate tupu ị gaa na oven. Mgbe ahụ chocolate ga-agbaze na ọnụ.
obere pastry mgwakota agwa - ½ n'arọ;
Kwadebe mgwakota agwa maka kuki Viennese. Tinye mgwakota agwa na tray mmiri.
Ekwesiri ime ka ichikota choro ma kpochie ya, fesa ya na oghere, ma kpuchie ya na akwa nke mgwakota agwa n'elu.
Kuki kuki chocolate Viennese maka ọkara awa.
Riz na soy ihendori
Salad Saịna - Ntụziaka mbụ maka nri nri nri ọ bụla!
Funchoza na akwụkwọ nri - na-atọ ụtọ ntụziaka maka ọkụ efere, salads na snacks
Harcho ke Georgian
Lasagna - uzommeputa
Grissini - uzommeputa
Schnitzel na Vienna
Ejiri odo odo - ejiji ejiji na echiche na-adọrọ mmasị
Ịkwa ime site kwa ọnwa - otu esi chọpụta?
Nleta maka ụmụaka na ụlọ
Obere jaket na-acha uhie uhie - ụdị kachasị mma na ihe ga-eyi ha?
40 foto nke ụmụ anụmanụ na-egosipụta ịhụnanya
Kedu esi esi gbapu tomato - usoro nile nke usoro
Nwanyị Queen nke Spain gosipụtakwara ịhụnanya ya maka ụdị ọchịchị onye kwuo uche ya
Ejiri oji - na ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ụta dị mma?
Kedu ka nwa ahụ si amalite?
Ocylococcinum n'oge ime
Na-agafe mgbidi na akwụkwọ ahụaja
Cocktails na blender maka ọnwụ
Biography nke Lisa Minnelli
Ego ole calorie dị na kiwi?
Jennifer Lopez: ịhụnanya na alụmdi na nwunye anaghị achọ ngwa ngwa
Mwube n'ime ụlọ
Mascara na-adịgide adịgide